Varotra Zava-mahadomelina, Politika Sy Asa Fanaovana Gazety: Iza No Manompo An’iza Ao Anatin’ny Fampielezankevitra Peroviana? · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Erin Gallagher
Voadika ny 13 Jona 2016 3:04 GMT
Mampitombo ny ahiahy momba ny ho fahafahany miady amin'ny kolikoly raha izy no lany ho filoham-panjakàna Peroviana ireo fanontaniana mikasika ny mety ho fifandraisana misy amin'ny antoko politikan'i Keiko Fujimori sy ny varotra zava-mahadomelina. Sary an'i Néstor Soto Maldonado nampiasàna ny lisansa Creative Commons (CC BY-NC 2.0).
Voaloton'ireo tantara ratsy sy fifampiandaniana ny fifidianana izay ho filoham-pirenena tao Però. Vao haingana kely mihitsy, nipoitra ireo fiampangàna mahakasika ny fisian'ny fifandraisana eo amin'ny varotra zava-mahadomelina sy ilay mpikambana ao amin'ny Kaongresy, Joaquín Ramírez, Sekretera Jeneralin'ny Fuerza Popular, antoko politika nandrotsaka an'i Keiko Fujimori ho mpifaninana ho filoha. Ny Alahady 15 May 2016 ny vaovao amin'ny fahitalavitra Peroviana Cuarto Poder dia nandefa tatitra iray niarahana nanao tamin'ny Univisión, izay namoaka fa efa nohadihadian'ny DEA i Ramírez. Nohadihadiana noho ny resaka famotsiambola ilay mpikambana ao amin'ny Kaongresy, heloka bevava iray izay anadihadiana azy ihany koa ao Però.
Ankoatra ireny ampamoaka ireny, andro roa taty aoriana ny gazety La Republica sy ilay media tsy miankina Ojo Público dia namoaka fa efa tamin'ny 2011 ary mbola mitohy ny fanadihadiana iray antsoina hoe “Hetsika Tsy Fikitika: Ny Fikambanana Arevalo Mpivarotra Zava-mahadomelina” notarihan'ny DEA sy Dirandro (Sampandraharaha misahana ny zava-mahadomelina ao anivon'ny polisim-pirenena Peroviana). Arahan'ilay fanadihadiana i Miguel Arévalo Ramírez, antsoina hoe ‘Eteco’, Peroviana iray mpanjakan'ny zava-mahadomelina, ary voarohirohy ao ihany koa i Joaquín Ramírez.
Mahavoarohirohy an'i Keiko Fujimori ny sasany tamin'ireo fanambaràn'ilay mpikambana ao amin'ny Kaongresy. Vetivety ilay mpirotsaka ho filoha dia nandà ireo honohono no sady niampanga an'i Pedro Pablo Kuczynski mpifanandrina aminy, ho manao “tetikady maloto”, saingy nanome fanambaràna misimisy kokoa. Nandritra izany fotoana izany, nandà tsy hiteny na inona na inona ny DEA momba ilay fanadihadiana, saingy namoaka fanambaràna iray izay nanazava fa “tsy niharan'ny fanadihadiana izany i Keiko Fujimori, na izao na tany aloha.”
Na izany aza, niditra naka ny media sosialy mba hanaovany ny tomban'izy ireo imasom-bahoaka ireo mpisera amin'ny Facebook, satria hita ny fisian'ny tantara efa ela teo amin'ny fifandraisan'ny anarana Fujimori sy ny varotra zava-mahadomelina. Ilay antropolojista Sandra Rodríguez, ohatra, nangataka ny hanesorana ny tombon-jo tsy ho azo enjehana ananan'i Joaquín Ramírez ary nampahatsiahy tranga sasany tamin'ny lasa:
Fidel Ramírez, dadatoan'i Joaquín Ramirez, dia mpiara-miombona antoka akaiky amin'i Montesinos [izay mpanolotsain'ny filoha fahiny, Alberto Fujimori, rain'ilay mpirotsaka ho filoha amin'izao fotoana]. Ankehitriny ny zana-drahalahiny, Joaquín Ramirez, no sekretera jeneralin'ny Fuerza Popular. Ary androany, miaraka amin'ny tantara ratsin'i Joaquín amin'ny resaka fanadiovam-bola maloto 15 tapitrisan'i Keiko, fantatsika ny antony. Tsy hoe fotsiny hazondamosin'ilay antoko politika ny varotra zava-mahadomelina. Fa koa satria tsy tapaka velively ny rohy nisy teo amin'ny varotra zava-mahadomelina sy ny politika, toy izay nisy teo amin'i Montesinos-Fujimori tany amin'ny taona 90s. Naverina nalamina fotsiny niaraka tamin'ny zanaka sy ny zana-drahalahin'ireo jiolahy raindahiny fahiny izy io.
Nanome tantara momba ny toejavatra rehetra nahatonga an'i Keiko Fujimori hfandray taminà vola tsy fanta-pihaviana i Álvaro Campana. Ireto no ohatra vitsivitsy :
1. Tamin'ny 2011, US $10,000 no noraisin'i Keiko Fujimori avy tamin'ilay voampanga ho mpivarotra zava-mahadomelina antsoina hoe Eudocio Martínez, fantatra kokoa amin'ny hoe Oyuquito. Inona avy no fifandraisana misy amin'i Keiko Fujimori sy ny varotra zava-mahadomelina tsy ara-dalàna?
2. Nahazo tontona tafakatra hatramin'ny iray tapitrisa sy sasany soles i Keiko Fujimori ary tsy nampiasa afa-tsy 39,000 soles [11697 USD]. Tsy nisy nilaza ho tompon'ny vola, kamiao iray no nangiazana izany. Fanafenana vola ho an'ny fampielezankevitra ve?
Niditra an-tsehatra ny media sy ny asa fanaovana gazety
Iny Alatsinainy iny ihany, Chema Salcedo avy amin'ny RPP, trano fampahalalambaovao ao an-toerana, dia nitafa tamin'i Gerardo Reyes avy amin'ny Univisión, ilay mpanao gazety nitarika ny fanadihadiana momba ireo fiampangàna famotsiambola. Notakian'i Salcedo taminy ny porofo ; novalian'i Reyes hoe ny tenin'ny solontenan'ny DEA dia ampy. Nohamaivanin'i Salcedo ny fahamarinan'io valinteny io ary nampisalasala azy ny fahaizan'i Reyes, na teo aza ireo loka marobe efa azony (isan'izany ny Loka Pulitzer ). Mandritra izany i Reyes dia nitatitra ny antsipirihany tamin'ilay fanadihadiana tany amin'ireo media hafa.
Tsy ela ny valinkafatra. Lesona hafahafa ho an'ny asa fanaovana gazety no niantsoan'ny tranonkala Clases de Periodismo ilay tafatafa:
Misy toedraharaha mahatonga antsika hino fa hoe mahay ny zavatra rehetra ny mpanao gazety. Misy toedraharaha mahatonga antsika hino fa tsy azo atao na inona na inona ry zareo sy ny mpitsara. Amin'ity raharaha ity, naka toerana iray hafa ilay mpanolotra fandaharana amin'ny fampielezampeo Radio Programas del Perú (RPP), Chema Salcedo : maro tamin'ny fotoana no nipetrahany ho toy ny mpiaro an'i Keiko Fujimori fa tsy mpanao gazety liana amin'ilay fanadihadiana nataon'ny Univisión sy ny Cuarto Poder.
Nitompo teny i Gustavo Faverón, mpanoratra hoe eo anatrehan'ilay tatitra izay mamoaka “ny fifandraisana tsy tambo ho isaina misy eo amin'ny varotra zava-mahadomelina, ny fandiovana vola maloto sy ny firotsahan'i Keiko Fujimori”, dia ny tsy fahampian'ny fahamatoran'ilay tatitra no ifotoran'ny famelezan'ireo mpanao gazety mpomba an'i Fujimori.
Fa mihoatra noho izany, talohan'ny nidirany ho amin'ny asa fanaovana gazety ho toy ny fanafenana mpanao heloka bevava dia tokony nieritreritra lalina ry Beto Ortiz, Chema Salcedo sy ireo hafa mpanao gazety nitaraina. Tsy mbola ampy ve ny hoe tsy nanontanian'zy ireo velively ary tsy nohadihadiany velively ny raharaha maizin'ireo politisiana tena mpanao kolikoly eto amin'ny firenena? Ankehitriny ry zareo mihazakazaka mba hampanginana na hampihenan-danja ireo vaovao izy hitan'ireo tena mpanao gazety marina.?
Mamaly i Joaquín Ramírez saingy misalasala ireo mpifidy
Nolavin’ilay mpikambana ao amin'ny Kaongresy, Ramírez, ny hoe mandalo fanadihadiana ataon'ny DEA izy, ary nambarany fa hampiditra fitoriana an'ireo mpanao gazety izay nanely ilay vaovao izy. Nampifandraisiny ihany koa ilay fitarainana sy ny fampielezankevitra izay, araka ny lazain'i Ramirez, dia ny hanohintohinana an'i Keiko Fujimori no tanjona. Kanefa, tsy vitany ny nampiseho antonta-taratasy manaporofo ny fiavian'ireo fananany marobe sy ny hareny izay anaovana fanadihadiana ireo.
Na teo aza ny filazàny ny maha-tsy manantsiny azy, ny 18 May i Ramírez dia nikisaka sy nametraka fialàna tsy ho sekretera jeneraly ao amin'ny antokon'i Keiko Fujimori
Fa tsy izany ihany no zavatra atrehan'ilay mpirotsaka hofidiana ; ny 20 May, nambara fa na i Fujimori na ny vadiny dia samy anaovana fanadihadiana avokoa momba ny resaka famotsiana vola maloto.
Anivon'ireny fitarainana rehetra ireny, feno fifampitifirana avy amin'ny andaniny sy ny ankilany ny adihevitra nifanaovan'i Fujimori sy Pedro Pablo Kuczynski ny 22 May teo. Raha tsy nety nanambara izay nivoaka nandresy mazava ireo mpandalina politika, Ojo Público kosa nijery ny zavamisy momba ireo fanambaràna sasany nataon'ny mpirotsaka tsirairay nandritra ilay adihevitra ary nahita fa telo tamin'ny fanambaràn'i Fujimori no diso daholo, raha ireo nataon'i Kuczynski indray, na diso, na famitahana na mampisalasala.
Andro vitsy mialoha ny fifidianana, mitoetra ny fisalasalàna eny amin'ireo mpifidy. Mijanona ho tsy mazava foana ny fifandraisana misy eo amin'ny varotra zava-mahadomelina sy ny antokon'i Fujimori ary mamela fanontaniana marobe tsy hisy valiny. Fanampin'izany, nilaza ny fanenjehana fa elingelenin'ny antokon'i Fujimori ny fizotry ny fanadihadiana izay atao amin'ireo mpikambana ao aminy. Na izany aza, ny fitsapankevitra vita vao haingana teo dia manome tombon-dàlana ho an'i Fujimori manoloana an'i Kuczynski.
Nitombo ihany koa ny fisalasalàna momba ny maha-mitombina ireo vaovao, indrindra fa noho ny fifandrohizana lasa mivandravandra hita misy eo amin'ny asa fanaovana gazety sy ny politika miaraka amin'ireo resabe misy amin'izao fotoana izao. Ho an'ny maro, mampahatsiahy ny tetikadin'ny media nampiasain'i Alberto Fujimori tany amin'ny taona 90s io.
Vokany, nametraka arofanina ireo fikambanana sy politisiana sasany momba ny mety hahavitan'ny governemantan'i Fujimori tena hiady tokoa amin'ny kolikoly na tsia. Ny mifanohitra amin'izany aza, taratra anatin'ireo fijoroana vavolombelona ny tahotra hoe ho lasa governemanta iray hanjakan'ny tsimatimanota ny fitantanan-draharaha, na ho iray izay vao mainka hanamafy ny fifamatorany amin'ny varotra zava-mahadomeina ka hamela an'i Però ho eny amin'ny làlan'ny fizorana ho lasa fanjakàna iray mpikirakira zava-mahadomelina.
Ity dia nadika avy amin'ny lahatsoratr'i Juan Arellano navoaka tao amin'ny bilaogy Globalizado.